आइएमएफले गर्‍यो नेपालसहित २५ देशको ऋणमोचन — janadristi
आइएमएफले गर्‍यो नेपालसहित २५ देशको ऋणमोचन
२ वैशाख २०७७, मंगलवार ०८:२१
अन्य दातृ निकायले के गर्छन्?
नेपालले आइएमएफसहित अन्य दातृ निकायसँग पनि यस्तै निश्चित अवधिको ऋण भुक्तानी तालिका पछि सार्न र सम्भव भएसम्म ऋण मोचनका लागि आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग यसबारेमा छलफल गरेका छन् ।
उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक लगायतसँग छलफल गरेका थिए । अहिले राजस्व प्राप्ति घटेको र रेमिट्यान्सको जगमा उभिएको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि वित्तिय स्रोत निकै दुर्लभ हुने भन्दै उनले ऋण भुक्तानी अवधि थप्नुका साथै थप सहायता दिन आग्रह गरेका छन् ।